JESOSY, NARATRA NEFA MPANDRESY – filazantsaramada
JESOSY, NARATRA NEFA MPANDRESY
Publié parfilazantsaramada	 mars 7, 2014 Laisser un commentaire sur JESOSY, NARATRA NEFA MPANDRESY
« Dia hampifandrafesiko hianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany: izy hanorotoro ny lohanao,ary hianao kosa hanorotoro ny ombelahin-tongony » (Gen. 3:15)
Ny dik-dik, dia kely indrindra amin’ny antilopy, hany ka tsy taitra amin’ny fihazana azy ny liona eny amin’ny lemak’i Afrika. Kanefa kosa tsy misy olona heverina ho kely sy tsy misy antony ka tsy kotabain’i devoly.
Hoy i Petera: « …fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany » (IPetera 5:8). Mamerina antsika ao amin’ny saha Edena izany, izay nahitantsika an’i Adama sy Eva nirona tamin’ny fakam-panahin’ny devoly ka latsaka tao amin’ny ota. Izany no niandohan’ny fahotana teto amin’izao tontolo izao. Efa nanomboka taloha kosa ny fahotan’i Satana raha nikomy tamin’i Raintsika izay any an-danitra izy sy ny anjeliny. Amin’ny maha fahavalon’Andriamanitra azy, dia mitady mandrakariva ny hanimba ny asan’Andriamanitra izay faratampony indrindra izy: dia ny olombelona nohariana araka ny endriny. Nefa nosakanan’Andriamanitra ny tetiky ny devoly, tamin’ny nanatanterahany ny teny fikasàny ka nanomezany antsika Mpamonjy, izay ambaran’ny Filazantsara fa Zana-behivavy. Ady lehibe tokoa no nifanaovan’i Satana sy ny Zanak’Andriamanitra, ary tao amin’izany ady izany no nahapotika ny herin’i Satana. Kanefa niaritra ratra mafy i Jesosy tamin’izany. Ary tena faharatràna nahafaty tokoa izany. Nitsangana tamin’ny maty i Jesosy ary nanambara ny fandreseny ny Tompontsika. Ny « liona avy amin’ny firenen’i Joda » (Apokalypsy 5:5) no nandresy azy izay mierona tahaka ny liona hitelina antsika kristiana, na lehibe na kely.
Satria tsy misy izay heverina ho kely ka tsy hazain’i Satana, dia tsy misy koa izay heverina ho madinika ka tsy tadiavin’ny Tompo mba ho vonjena. Maty ho antsika rehetra Jesosy. Koa matokia fa tia anao Izy, ary ny Baiboly no manambara izany aminao!
Jesosy Kristy Tompo mampahery anao
Publié parfilazantsaramada mars 7, 2014 Publié dansUncategorized
IZA NO TOKONY HOJERENA ALOHA?